४६ दिनदेखि यस्तो अखडामा यसरी बसिरहेका छन् जेलेन्स्की (हेर्नुस् भिडियोसहित) — Imandarmedia.com
४६ दिनदेखि यस्तो अखडामा यसरी बसिरहेका छन् जेलेन्स्की (हेर्नुस् भिडियोसहित)
किभ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सीबीएसको ’६० मिनेट’ नामक कार्यक्रममा भनेका छन्, “रुसी बमबारीको खतराबाट बच्नका लागि म र मेरो टोली राजधानीको किभस्थित यस स्थानमा बत्ती निभाएर अँध्यारोमा काम गर्दै आइरहेका छौँ ।
सीबीएसको पत्रकार टोलीले जेलेन्स्कीको यस अखडामै गएर अन्तर्वार्ता लिएको हो । ४६ दिनदेखि राष्ट्रपति र उनको महत्वपूर्ण र्कमचारी टोली यही अखडामा बस्दै आएका छन् । सीबीएसको पत्रकार स्कट पेल्लीले गत ६ अप्रिलमा जेलेन्स्कीलाई उनको किभ कमान्ड सेन्टरमा लिएको अन्तर्वार्ता आइतबार राति प्रसारित भएको हो ।
पेल्लीले युक्रेनी फौज ती म्याट्रेसमा सुत्ने गरेको बताएका छन् ।पेल्लीले तपाईं त सुरक्षित हुनुहुन्छ नि भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जेलेन्स्कीले जवाफ दिएका छन्, “मलाई ठिकै छ । सुरक्षा सम्बन्धमा म पूरै ढुक्क छुँ ।
उनले रुसी ऊर्जामाथि ’वास्तविक प्रतिबन्ध’ लगाउनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।डा. लारिओनोभले अन्य मुलुकहरूले आफ्ना ऊर्जा प्रयोग कटौती गर्ने भनेर दिएको चेतावनीलाई रुसले गम्भीर रूपमा नलिएको पनि बताएका छन् ।
ईयूले आफूले वार्षक उपभोग गर्ने करिब ४० प्रतिशत ग्यास र २७ प्रतिशत तेल रुसबाट आयात गर्दै आएको छ ।यसैसाता मात्र युरोपेली संघका कूटनीतिज्ञ जोसेप बोर्रेलले भनेका छन्, “हामीले प्रत्येक दिन हामीलाई ऊर्जा आपूर्ति गरिदिएबापत पुटिनलाई एक अर्ब युरो तिर्छौं ।“
डा. लारिओनोभले दाबीका साथ भनेका छन्, “यदि ऊर्जामाथि वास्तविक प्रतिबन्ध लगाइने हो भने सम्भवत एक वा दुई महिनाभित्र युक्रेनमा रुसी सैनिक अपरेसन रोकिने छ।